Sawir:Hoggaamiyaha Ururka Ikhwaanka Oo Daldalaad Lagu Xukumay iyo Alsiisi Oo Madaxa Ka Dhunkaday Boqorka Sacuudiga.
Saturday June 21, 2014 - 17:14:16 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Masar ayaa sheegaya in maxkamad melleteri ay xukuno daldalaad ah ku ridday boqolaal qof oo ku eedaysan falalka waxa loogu yeero argagaxisada.
Alsiisi oo Madaxa ka dhunkanaya Boqorka Sacuudiga
Taliska melleteriga inqilaabka ku qabsaday talada wadanka masar ayaa ku dhawaaqay in xukunno daldalaad ah ay muteysan doonaan 197 kamid ah saraakiisha ururka ikhwaanul muslimiinta ee sanaddii lasoo dhaafay talada laga tuuray.
Mas’uuliyiinta daldalaadda lagu xukumay waxaa kamid ah Max’med Badiic oo ah murshidka guud ee Ururka ikhwaanul muslimiin islamarkaana ku xiran xabsi ammaankiisa si aad ah loo ilaaliyo.
Qaadiga maxkamadda daadguutka dambiyada masar ayaa ku dhawaaqay xukunka kama dambaysta ah ee lagu fulin doono saraakiishan loo heysto falal dambiyeedyo argagaxiso loogu yeeray.
Warbaahinta Masar ayaa sheegtay in ragga maanta laxukumay lagasoo soo soocay 529 maxaabiis ah oo bilo ka hor daldalaad lagu xukumay waxaana lagacabsi qabaa in 197-dan qof ladili doono dhammaantood.
Dhinaca kale 5 qof oo Masaari ah ayaa lagu dilay magaalada alqaahira kadib dibad baxyo ballaaran oo ka dhan ah inqilaabka oo gilgilay xaafadaha muhiimka ah ee magaalada.
Ciidamada booliska ayaa rasaas nool nool u adeegsaday shacabka iskusoo baxyada dhigayay oo ku qeylinayay erayo ka dhan ah Generaal Cabdi Fataax alsiisiga dhawaan isku magacaabay madaxweynaha Masar.
Boqorka dabadhilifka xukuumadda daaguutka Aala sacuud ayaa gaaray magaalada alqaahira wuxuuna kulan layeeshay alsiisi iyo saraakiisha melleteriga ee inqilaabka hoggaaminaysa.
Cabdalla Bin Cabdul Caziizka waayeelka ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay isbitaal kuyaal wadanka almaqrib,telefeshinka masar ayaa lagasii daayay alsiisi iyo boqor cabdalla oo wada fadhiya gudaha diyaarad gaar ah oo garoonka alqaahira fadhida.
Hogaamiyaha Sacuudiga ayaa socodka gabay wuxuuna madaxda Masar kula kulmayaan diyaarad dusheed, sacuudiga iyo imaaraadka carabta ayaa lacago malaayiin dollar ah guddoonsiiyay alsiisi waana maskaxda ka dambaysa inqilaabka.
Alsiisi ayaa madaxda ka dhunkaday Mudanihiisa Sacuudiga wuxuuna aamisanyahay in Sacuudiga la'aantiis uusan madaxweyne ka noqon laheyn wadanka Masar,C/Fataax Alsiisi ayaa maalin qura magaalada Al Qaahira ku laayay dad kabadan 2,500 oo qof.